Uphengululo lweNew 2017 "Kindle Oasis 7. Iimpawu, amaxabiso kunye nokunye - Zonke iReaders | Zonke iReaders
2017, Kindle i-Oasis 7 yoVavanyo
Bendi iinyanga ezimbalwa kuvavanywa iO Kindle OasisIsifundi seAmazon esiphambili soluhlu (Thenga apha). Kudala ndivavanya kwaye ndithelekisa iinguqulelo zayo ezimbini, eyakudala eyi-6 kunye nenye entsha esuka ku-2017 7 ″ kwaye ayinamanzi.
Le intshi eyongezelelweyo eyahlulahlula kwi-6 yeeklasikhi iyaxabiseka kakhulu. Sisikrini esikhulu kodwa ngaphandle kwayo nayiphi na into egqithileyo. Ngokusuka apha sinokuthi umntu ofundayo ulungile.
Ukugqitywa kwealuminium kuyinika ukomelela kunye nokubonakala kwepremiyamu, eyahlula kwezinye izixhobo. Ubumdaka ekusebenzeni nasekuguqukeni kwephepha yile nto iAmazon ibisoloko isisebenzisa kuthi ngohlobo lwayo. Kodwa ndiyakuxelela ngayo yonke into kuhlalutyo 🙂
4 Izibane kunye neemenyu
5 Uhlobo lweOasis 2017 vs iOasis «indala»
7 Uhlobo lwe-Oasisfundo lwegalari yezithombe
7 »bonisa ngePhepha leWhite kunye netekhnoloji ye-E Ink Carta ™, ukukhanya okuhlanganisiweyo kokufunda, i-300 dpi, itekhnoloji yefonti elungiselelwe kunye neethoni ezili-16 ezingwevu
2 iimodeli 8 okanye 32 GB yememori yangaphakathi
Uyilo ngononophelo kodwa ngaphandle kokungaqhelekanga. Inyaniso kukuba, ubuncinci be- € 250 ukuba isixhobo sixabisekile, ndicinga ukuba ukupakisha kufanele kube ngaphezulu. Kuchanekile, kuza kukhuselwe kakuhle, kunye nebhokisi eqinileyo enokusetyenziswa kwakhona, kodwa ayisiyontle. Ingayinkcukacha ukuba ibhokisi yenzelwe kwaye singayisebenzisa ukugcina isixhobo sethu ngesiqhelo.
Yinto yokufunda kwinqanaba eliphezulu, kwaye uyilo lwayo olulinganayo ukongeza ekwenzeni ukuba ibe ntle, kodwa
Ityala elisemthethweni alisenabhetri njenge-Kindle Oasis yakudala. Inyani yile yokuba nangona ezi zixhobo kwiiveki ezidlulileyo ndicinga ukuba yinto encedisayo enkulu eyahlulahlula kwaye kufuneka iqhubeke.
Izibane kunye neemenyu
Izibane ziyafana kwaye zisebenza kakuhle. Indawo ekuphela kwayo apho ndibeneengxaki khona xa kusenziwa ukufunyanwa kokukhanya okuzenzekelayo, Kuba ngokuxhomekeke kwimeko apho bendivele ndithambise incwadi kancinci, iyonyuse okanye yehlise ukukhanya kwaye ibicaphukisa. Utshintsho oluninzi, ngokungathi inzwa inovakalelo kakhulu. Kakhulu kangangokuba ekugqibeleni ndiyikhubazekile kwaye ndisebenzise indlela yesandla. Okanye ndiyenze yasebenza indlela ezenzekelayo ukuze ndibone ngobungakanani obundicebisileyo ukuba ndibanokukhanya emva koko ndiyicime ukuze kungabikho kutshintsha.
Sonke siyazi I-Amazon Kindle isebenza njani, injani imeko yayo, ukubonakala kwayo, ukujonga kunye nemirhumol, Kule meko ndingathanda ukuqaqambisa ukusebenza endingekazami okwangoku. Imalunga nayo Ilizwi elinobulumko. Iluncedo kakhulu kwabo baqala ukufunda isiNgesi. Inika imikhondo kumagama okanye amabinzana acinga ukuba anzima kwaye iluncedo olukhulu.
Ewe, iimvavanyo endizenzileyo ngokukhanya kunye neLizwi loBulumko elisebenzayo ziye zehlisa ibhetri ngendlela ebaxiweyo. Andizange ndibone ukusetyenziswa okunjalo kwisixhobo. Ukuba sichitha kuphela ukukhanya, izinto ezisetyenzisiweyo ziqhelekile.
Uhlobo lweOasis 2017 vs iOasis «indala»
Apha ungazibona zombini zidibene kwaye uthelekise umahluko kubungakanani. Ngapha koko, isidala esidala asisathengiswa.
Sesona sixhobo sibalaseleyo kwimarike yanamhlanje. Isiduru esibizayo ngaphandle kwamathandabuzo. Kodwa ukuba uyafuna kwaye unako ukuwufikelela, uyakushiya umangalisiwe. Le intshi eyongezelelweyo ikunika ubomi xa ufunda ngaphandle kokuzibaxa izinto kwaye ndiyayithanda uyilo lwe-asymmetric kwaye ndiyifumana irgonomic kakhulu. Ngoyena mntu kulula ukufunda ukubamba endikhe ndazama.
Umahluko ophambili endiwubonayo phakathi kwe-Oasis kunye ne-Paperwhite, ngaphandle kobungakanani obucacileyo, uyilo
Uhlobo lwe-Oasisfundo lwegalari yezithombe
Uhlobo lwe-Oasis 2017
Umendo opheleleyo kwinqaku: Zonke iiReaders » isibulali » I-eReaders » 2017, Kindle i-Oasis 7 yoVavanyo
Ndifumene lo Kindle ngoDisemba kwaye kubonakala ngathi kuyamangalisa. Ndigqibele ndiyibuyisela emva kweentsuku ezingama-30 kuba bendingafumani jusi kuyo. Ngapha koko, bendifunda ixesha elincinci kakhulu ngelishwa. Ukungabikho kwexesha kunye nezinto. Izigqibo zam:
- Ukukhanya okumangalisayo. Khange ndiqaphele iingxaki ozikhankanyileyo ngenzwa yokuqaqamba inyani. Inye into, koku unokucima ngokupheleleyo isibane. Nditsho kuba kwi-KP2 (eyona ndinayo kwaye ndiyigcinayo) kuhlala kukho ukukhanya okuncinci.
-Isikrini: sinomtsalane. I-intshi eyongezelelweyo ibonisa okuninzi. Ndikwazile ukuthelekisa i-KP ecaleni kwayo kwincwadi enye nakwindawo enye kwaye kubonakala kuyinto engakholelekiyo ukuba i-intshi yenza umahluko omkhulu. Okuninzi okubhaliweyo kuyangena kule ngaphandle kwamathandabuzo. Iintetho zeAmazon malunga nama-30% ngaphezulu. Ndiyayikholelwa.
Uyilo: olunomtsalane. Kuyamangalisa indlela entle ngayo kwinxalenye entle. Inqaku elingalunganga, kusenokuba nzima ukufunda ukulala phantsi ngesandla esinye. Kuya kufuneka ufumane ukuxhoma kwayo ukuyibamba. Inyani yokuba iodolo yamaphepha okujika amaqhosha anokujikwa iyanceda kule meko.
Eyona nto imbi kakhulu kuluvo lwam ibhetri. Iyabila kakhulu. Nge-Paperwhite ndingafunda iincwadi ezininzi ngaphandle kwengxaki. Akukho namnye one-Oasis. Khange ihlale iveki. Ngokukhanya ewe, kunye neWifi ... kodwa iyafana kwi-KP kwaye akukho mbala kwimeko yebhetri.
Kwandibuhlungu ukuyibuyisela inyani. Kwakunzima kum ukuba ndibuyele emva ngo-6 ″ kwaye ke ngu-7 ″ uvuyo kodwa njengoko ndisitsho andikhange ndilisebenzise. Mhlawumbi kamva ndiza kuphinda ndibuze.
Ngendlela, uSuku lwePrimeyali ziintsuku ezisi-7 ukuba kude kwaye ndinoluvo lokuba siza kothuka eSpain. Ukuba ujonga iphepha leAmazon.com kwisibhengezo seNkulumbuso yeentsuku ezisi-7, iAmazon Echo iyavela ebhasikithini. Ndicinga ukuba baya kuyithengisa ngalo mhla kwilizwe lethu. Sobona.
Kuyinyani ukuba ibhetri ilungile, kodwa andikhange ndiyiqaphele nantoni na ebaxiweyo ngaphandle kokukhanya okuzenzekelayo + kwiLizwi oLumkileyo onokuphantse ubone ukuba ikhutshwa njani. Kulihlazo ukuba bayisusile imeko yebhetri.
Masibone ukuba usuku lokuqala lwangoMvulo lusizisela isimanga okanye isaphulelo
Nacho, ndicinga ukuba iya kuba yinto engathandekiyo ukuba uyaphonononga olo hlobo phakathi kwabavakalisi abaqhelekileyo kule bhlog 😉
Ewe, ezi zizabelo kwaye ziyabuyiselwa. Kodwa ukuba basinike enye, siyayibona 🙂
UCarlos Nuñez sitsho
Molo, ndinguCharly nuñez waseArgentina, ndabelana ngezimvo zakho, unyana wam waya eUnited States wandinika le modeli intsha ye-Oasis, bendikade ndisebenzisa i-EXCELLENT kindle paperwhite ereader iminyaka eliqela.
Nge-oasis ndinengxaki enkulu kwaye andisombululi ngaphandle kokuphinda ndiyimise kwakhona kwaye ndiyicwangcise kwakhona.
I-Enigma: Xa ndifunda incwadi kwaye ndisiya ekuqaleni -Khaya- kwaye ndifuna ukuqhubeka kwakhona, ndiphulukene nephepha endishiye kulo ukufunda ,. Igcina kuphela ukuba ndiyayivala i-ebook kwaye ndiyivule kwakhona kwakule ncwadi inye, oko kukuthi, kufana nokuyishiya ilindile. Ukuba ufunda iincwadi ezimbini ngaxeshanye ulahlekelwa likhasi lesalathiso kuzo zombini
Khangela kumaphepha ahlukeneyo ngaphandle kokufumana le ngxaki. Ukuba umntu ebenayo le ngxaki kwaye wasifumana isisombululo, ndiyalubulela uncedo lwakho
Phendula uCarlos Nuñez
Ukuba ukuphinda usete kumzi-mveliso akusombululi, ukhe wazama ukuqhakamshelana nenkxaso yezobuchwephese yeAmazon ukubona ukuba bakuxelele ntoni? Baza kuyilungisa okanye batshintshe isixhobo ukuba sinesiphene.